के चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभले मानवअधिकारलाई हनन गरिरहेको छ? - नेपाल एक्सन Online News Nepal
Homeअन्तराष्ट्रियके चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभले मानवअधिकारलाई हनन गरिरहेको छ?
के चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभले मानवअधिकारलाई हनन गरिरहेको छ?
बिआराईले धेरै आवश्यक विकास प्रदान गरेको छ, तर यसले थप अधिनायकवाद पनि उत्पन्न गरेको छ।
चीनमा बीआरआईको निर्यातले विश्वव्यापी वृद्धिको वर्तमान धारणालाई नयाँ आकार दिइरहेको छ। यसले राजनीतिक प्रक्रियाको पुनर्संरचना पनि गरिरहेको छ । बीआरआईले लाखौं एशियालीहरूलाई उनीहरूको आर्थिक नायकको शक्तिशाली हातको रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट बाहिर धकेलिरहेको छ। यसले एसिया र अफ्रिकाका मानिसहरूलाई पनि मोहित तुल्याउँछ किनभने तिनीहरू पहललाई तिनीहरूका पूर्व उपनिवेशवादीहरूलाई तिनीहरूका निम्न नायकहरूले ठूलो धक्काको रूपमा हेर्छन्।
चीनको बीआरआईले आफ्ना लक्षित देशहरूमा राम्रो सडक, अस्पताल, विद्यालय र अन्य आयआर्जन गर्ने पूर्वाधारको वाचासहित थप रोजगारीका अवसरहरू उपलब्ध गराएको छ।
यसले थप अधिनायकवाद पनि सिर्जना गरेको छ – न्यायिक प्रणालीलाई थप कमजोर बनाउँदै, असहमतिको थप दमन, चीन-प्रेरित साइबरसुरक्षा कानून अन्तर्गत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा थप प्रतिबन्धहरू – सबै सरकारी नेताहरूलाई चिनियाँ शासनको मोडेलप्रति वफादारी देखाउन मार्ग प्रशस्त गरेको छ।
बीआरआई चीनका लागि दोहोरो मार हो। यसले विश्वव्यापी शक्ति सन्तुलन परिवर्तन गरेको छ। यसले विकासका लागि नागरिक स्वतन्त्रता र राजनीतिक बहुलवादको अपेक्षाद्वारा निरुत्साहित बलियो अधिनायकवादी प्रणाली चाहिन्छ भन्ने चीनको लामो समयदेखि चलिरहेको र स्व-सेवा गर्ने तर्कलाई पनि प्रतिध्वनि गर्दछ।
चीनको सीमानाबाहिर नागरिक स्वतन्त्रतामा चीनको बीआरआईको प्रभावले संयुक्त राज्य अमेरिका र उसका सहयोगीहरूसँगको व्यापार युद्ध बढेको छ। यो सत्य कथा हो र मानवअधिकारमा बीआरआईको वास्तविक प्रभावलाई स्वीकार गर्न सकिन्छ। यसले विश्वभर मानवअधिकारमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । चीनको कीर्तिमानको बारेमा भन्नु पर्ने धेरै उदाहरणहरू यता उता छरिएका छन्।
बिआरआई परियोजनामा ​​रहेको चीनको विस्तारवादको एजेन्डा मुख्य नारा/प्रभाव हो। २०१४-२०१८ को अवधि महत्त्वपूर्ण छ किनभने यसले विश्वको सम्पूर्ण राजनीतिक वातावरणको आकारलाई नष्ट गरेको छ।
Previous articleभारतमा नेपाली विद्युत प्रति युनिट २० रु सम्म
Next article“चिनको नयॉ सिमा कानुन”